Yaa codsado furriinka inta badan Ragga ama Dumarka? (Daraasad wax badan banaanka soo dhigtay) – Filimside.net
Yaa codsado furriinka inta badan Ragga ama Dumarka? (Daraasad wax badan banaanka soo dhigtay)
Khubaro ka tirsan jaamacadda Michigan ee ku taalo dalka Mareykanka ayaa sameeyey cilmi baaris ku aadan sababaha keena furitaanka iyo cidda Mas’uulka ka ah Ragga ama Dumarka?
Websiteka la yiraahdo Phys.org ayaa faahfaahin buuxda ka bixiyey dasaarada ay sameysay jaamacadaas.
Cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadaas ayaa Su’aalo waydiiyey ilaa 355 shakhsi oo isugu jiray rag iyo dumar, waxayna daraasadaan socotay muddo 16 sano ah, waxayna inta badan Su’aalaha ku saabsanayeen Khilaafka ka dhasho xiriirka ka dhexeeya labada isqabta iyo isdhexgalka labada dhinac.
Iyadoo la raacayo natiijada kasoo baxday Su’aalihii la waydiiyey 355 qof, ragga ayaa ku jawaabay in Khilaafka ka dhex dhasho lamaanayaasha ay ka leeyihiin kala bar halka inta kalana ay ku eedeeyeen Dumarka la qabo inay keenaan, halka xaasaskii su’aalahaas la waydiyey ay sheegeen in dumarka ay muujinayaan qanacsanaan badan marka loo eego nolosha guurka.
Iyadoo xaaladda sidaas tahay, ayey haddana daraasadda sheegtay inay codsiyada ugu badan ee furiinka gudbiyaan haweynka iyagoo ku laba jibaarma kuwa ay gudbiyaan Ragga.
Daraasadda ayaa Inay Haweenka Gudbiyaan codsiyada ugu badan ee furriinka ku micneysay inaysan ragga dooneynin inay wax ka badalaan hab dhaqankooda, sidoo kalana aysan diyaar u aheyn inay sameeyaan Tanaasul lagu ilaaliyo nolosha ay la wadaagaan xaasaskooda.
Daraasada ayaa sidoo kale lagu ogaaday in haweenku ay cabasho la kulmaan bilowga xiriirka guurka in ka badan kuwa ay ragga la kulmaan, waxayna arrintaas keentaa inay haweenku ku jiraan silac waqti dheer ah taasoo ugu dambeyn keento inay haweenka Muujiyaan Xanaaq iyo qanacsanaan la’aan.
Keira Berditt oo ah agaasimaha Daraasadaan ayaa sheegtay in gabdhaha ay guurka kadib sugaan arrimo waaweyn oo ay gaaraan in ka badan ragga maadaama ay iyaga kaliya ka fakaraan bilowga Nolosha guurka .